Global Voices teny Malagasy · zhhantar – Febroary 2011
zhhantar · Febroary, 2011
Lahatsoratra farany an'i zhhantar tamin'ny Febroary, 2011
25 Febroary 2011
Mpanoratra Sasa Milosevic · Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana
24 Febroary 2011
Fotoan'ny revolusiona izao manerana ny tontolo Arabo, miaraka amin'ny vahoaka mijoro sy miantso fiovàna ara-politika, ekonomika sy ara-tsosialy. Fifanatonana, fanaovana fihetsiketsehana sy fanoherana manerana ny faritra no mameno ny fandaharam-potoanantsika, miaraka amin'ny vaovao mahavaky fo amin'ny fomba ataon'ny governemanta Arabo iray aorian'ny fampiasan'ny iray ny paikady mitovy hamdravàna ny fanoherana...
23 Febroary 2011
Azerbaijan: Miala amin'ny karipetra mankany amin'ny bàn-kiraro
Mpanoratra Aygun Janmammadova · Azia Afovoany sy Kaokazy
Voasoratra ao anatin'ny Lisitry fanehoana ny Kolotsaina Nolovaina hatramin'izay tsy mety miovan'ny taranak'olombelona (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) tamin'ny herintaona izay nokarakarain'ny UNESCO ny karipetra avy any Azerbaijan. Misarika ny fijerin'ny mpitoraka bilaogy ihany koa izy ireo matetika.
22 Febroary 2011
Haiti: Fanampiana avy any Slovakia notazonin'ny ladoany mandritra ny folo volana
Kontenera miaraka amin'ny sambo faharoa misy ny fanampiana ara-olombelona avy any Slovakia no notazon'ny ladoany any Haiti efa ho folo volana. Mandika ny fomba fijerin'ny mponina amin'ny aterineto Slovaky ny olana i Tibor Blazko.
21 Febroary 2011
Mpanoratra Julie Owono · Gabòna
20 Febroary 2011